Kuchinja kukuru mudiki iPad Mini ye2021 | IPhone nhau
Kuchinja kukuru kune iyo diki iPad Mini kubva 2021
Vazhinji vakasara neuchi pamiromo nekusvika kweiyo nyowani iPad Pro uye chokwadi chekuti Apple yanga ichida kurega imwe nguva kuti ipfuure kuti ivandudze echinyakare shanduro dzeiyo iPad uye iyo iPad Mini, zvisinei, tinounza mashoko akanaka.
Iyo Mini Mini Mini inosvika muna 2021 ichave iine USB-C uye Smart Connector pakati pezvimwe zvinhu zvitsva zvinoita kuti chive chinhu chinoshamisa. Aya ndiwo mashandisiro anoita Apple kubheja paMini seimwe yeanoyevedza macompact size saizi kana zvasvika pamahwendefa, isu tichazopedzisira tichizviona?
Sezvasimbiswa mukati 9to5Mac, vakakwanisa kuziva kuti iyo nyowani iPad Mini ine kodhi zita rekuti J310 uye zvakanyanya zvaizounza nhau dzinonakidza, yekutanga ndeyekuti iyo Mini Mini ichakwira iyo Apple A15, imwe yemaprosesa azvino kubva kukambani yeCupertino. Asi simba iri rese risingadzorwe haribatsiri, ndosaka rakafunga kuperekedza ne USB-C uye Smart Connector yezvishandiso zvakaita semakhibhodi. Nenzira iyi, iyo yechinyakare iPad ingangove yekupedzisira iyo iPad ine Mheni yekubatanidza, saka remangwana rakanyorwa muUSB-C kiyi zvirinani neApple.
Iyi A15 processor ichave yakafanana mashanu-nanometer yekugadzira sisitimu seA14 nemisiyano yayo, iyo A15X, yatove patafura. Iyi USB-C ichatibvumidza nekukurumidza uye nyore kupinda kune zvishongedzo uye ndangariro masystem ayo anogona kupa iyo Mini Mini akawanda mamwe masimba kupfuura isu zvatingafungidzira. Mune chinhu ichi, Apple iri kutyora zvirongwa zvese zvaanga achimisa. Kwechinguva, iyo yekupinda-chikamu iPad, inonzi J181, inonamira neApple's A13 processor uye nemutengo uri pakati nepakati peayo 10,2 inches, nepo Iyi iPad Mini kubva muna 2021 inotarisirwa kunge iri pakati pe8,5 ne9 inches.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Kuchinja kukuru kune iyo diki iPad Mini kubva 2021
Ungaziva sei kana yako iPhone yatapukirwa naPegasus
Matipi ekuchenesa eApple emidziyo yedu: "Usambofa wakaita bleach kana hydrogen peroxide"